महिलाको मृत्यु « Janata Samachar
Tag: महिलाको मृत्यु
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकामा स्कुटरको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु भएको छ । चाँगुनारायणबाट भक्तपुरतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश ३–०२–०१५ प ७२६५ नम्बरको स्कुटरले भक्तपुर नगरपालिका १० भक्तपुर–चाँगु सडक वान्टीमा महिलालाई ठक्कर दिएको
प्युठानको क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलाको मृत्यु
सांकेतिक : तस्विर काठमाडौं । प्युठानको क्वारेन्टाइनमा बसेकी मल्लरानी गाँउपालिका ४ गहतेराकी २६ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको ऐरावती गाँउपालिका ६ स्थित बिजुली जनता माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेकी
जंगली च्याउ खाएर एक महिलाको मृत्यु
संखुवासभा । सभापोखरी गाउँपालिका–२ मा जंगली च्याउ खाएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । जंगली च्याउ खाएर सभापोखरी–२ गोठगाउँकी २४ वर्षीया मनिला राईको बिहीबार राति मृत्यु भएको हो । मनिलाको
ट्रकको ठक्करबाट साइकलयात्री महिलाको मृत्यु
सिरहा । पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ मैनाबत्ति पुलमा ट्रकले किचेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आइरहेको ना. ५ ख. ३३०९ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा साइकलयात्री
हात्तीको समूहले आक्रमण गर्दा महिलाको मृत्यु
सप्तरी । शम्भुनाथ नगरपालिकामा हात्तीको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट आएको हात्तीको समूहले आक्रमण गर्दा शम्भुनाथ नगरपालिका–२ भलुवाही टालकी ३८ वर्षीया जानकी मगरको मृत्यु
घाँस काट्न जाँदा भिरबाट लडेर महिलाको मृत्यु
ओखलढुङ्गा । मोलुङ गाउँपालिका–६ श्रीचौरमा भिरबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । घाँस काट्न जाँदा भिरबाट लडेर श्रीचौरकी ६१ वर्षीया धनमाया तामाङको मृत्यु भएको हो । आइतबार बिहान भिरबाट
अछाम । जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत एक महिलाको मृत्यु भएको छ । मंगलसेन नगरपालिका वडा नम्बर ५ की ५१ वर्षीय देवु बिकको बिहीबार आइसोलेसन मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख
सप्तरीमा प्रहरी र बासिन्दाबीच झडप, महिलाको मृत्यु
सप्तरी । खडक नगरपालिकामा प्रहरी र बासिन्दाबीच झडप भएको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा लकडाउन कार्यान्वयन गराउन इलाका कार्यालयबाट कल्याणपुरबाट खटिएका प्रहरी र बासिन्दाबीच झडप भएकाे हाे ।
भंगहा नगरपालिका–५ मा बिहीबार राति विषालु सर्पले डस्दा एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।